Yan Aung: October 2010
ကွန်ပြူတာကို ဖက်ပြီးအိပ်တတ်ကြတဲ့ ကွန်ပြူတာသမားစစ်စစ်တွေ အမြဲညည်းညူတောင့်တတတ်တာ တစ်ခုရှိပါတယ်.
Memory မြှင့်လို့ရရင်ကောင်းမယ်. မြှင့်လိုက်ချင်တယ်.
အဲလိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ တခဲခဲနဲ့ ရှိနေပေမယ့်လည်း လူတိုင်း memory မြှင့်တဲ့ဖက်ကို မရောက်နိုင်ကြပါဘူး. အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပေါ့ဗျာ. RAM Card တွေ ဈေးကြီးတာကလည်းတစ်ကြောင်း၊ စက်ကိုဖွင့်ပြီး လုပ်ရမှာလည်း မရဲတာကလည်း နှစ်ကြောင်း၊ အဲ. လက်တွေ့အကျဆုံးပြောရရင်တော့ (ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့) လုပ်ရမှာ ပျင်းနေတာ.. ဟတ်ဟတ်.
ကဲဗျာ. ဘာမှမပူနဲ့... မြန်.လွယ်.ကောင်း နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပေးမယ်. ညီအစ်ကိုတို့ရဲ့ RAM မြင့်လွန်းလို့ စိတ်တောင်ညစ်သွားမယ်.
ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ အမြဲတစေ ထိတွေ့ကိုင်တွယ် အသုံးပြုနေရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအရ အသုံးတည့်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတစ်ခု လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေချင်ပါတယ်.
ကွန်ပြူတာကို အမြဲလိုလိုအသုံးပြုနေရသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တာတွေက အညောင်းမိတာ၊ ခါးနာတာ၊ မျက်ရည်ပူတွေ ကျလာတာ စတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်. ခါးနာတာတို့ အညောင်းမိတာတို့အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် memory foam လုိ့ခေါ်တဲ့ ခေါင်းအုံးလေးတွေ၊ ကျောမှီလေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပြုပြင်လို့ရပါတယ်.
Posted By Yan 18 Comments
ပြတင်းမှန်တံခါးကို တဖျောက်ဖျောက် ရိုက်ခတ်နေတဲ့ မိုးစက်တွေက တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာ အတွေးတွေများစေတယ်.
အထူးသဖြင့် အခုလို ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အိပ်မပျော်နိုင်သေးဘဲ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့ အရသာကို ခံစားသက်ဝင်နေတဲ့ သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်အတွက်ပေါ့..